Mmanụ CBD Maka Ọkpụkpụ | Ngwọta CBD kacha mma na 2020
Mmanụ CBD maka Acne
Kedu ihe na -ebute ihe otutu?
Otu esi eji mmanụ CBD maka ihe otutu
Kedu ka mmanụ CBD si emeso ihe otutu?
Ihe otutu bụ otu n'ime ọnọdụ akpụkpọ ahụ nke na -emetụta ndụ ọtụtụ ndị na -eto eto, mana ọbụna ndị anyị na -abụghị ndị ntorobịa ọzọ na -eju anya site na mgbawa mgbe ụfọdụ.
Nsogbu akpụkpọ ahụ dị ka ihe otutu na -eme ka anyị were ihe kemịkalụ nwaa ma kpochapụ zits. Mana ihe ndị a na -ebutekarị iwe na akpụkpọ ahụ. Agbanyeghị, enwere ihe sitere n'okike nke nwere ike ịbụ azịza maka nsogbu akpụkpọ a.
Cannabidiol ma ọ bụ CBD bụ nke a maara dị ka otu n'ime ihe karịrị otu narị ogige akpọrọ cannabinoids nke dị na osisi Cannabis Sativa. Cannabidiol maara nke ọma maka mgbochi nrụgide, nchekasị, mgbochi mkpali na ihe mgbu mgbu.
N'adịghị ka tetrahydrocannabinol ma ọ bụ THC, nke bụ cannabinoid na-arụ ọrụ na wii wii, cannabidiol enweghị mmetụta mmụọ, ya bụ, ọ gaghị eme ka ị dị elu, n'agbanyeghị ole ị were.
Kama, ihe a dị ịtụnanya kwesịrị inwe ọtụtụ uru ahụike, n'ihi mmekọrịta ya na sistemụ ahụ nke amabeghị afọ iri atọ gara aga.
Usoro endocannabinoid (ECS) bụ sistemụ mgbaama dị na anụ mammals, nke na -ahazi ọrụ dị iche iche nke anụ ahụ, gụnyere agụụ, ebe nchekwa, mgbu, ọnọdụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Na ihe niile na -enye aka na homeostasis ma ọ bụ itule ahụike. Ahụ anyị na -emepụta endocannabinoids, nke bụ neurotransmitters na -ezigara ndị nabatara n'ime ahụ anyị ozi ka ha mee ihe.
N'ụzọ ụfọdụ dị ịtụnanya, phytocannabinoids dị na osisi cannabis Sativa na -eicsomi ọrụ nke endocannabinoids. Cannabinoids dị ka cannabidiol ma ọ bụ akara ọcha CBD ejikọtara ya na uru ahụike dị iche iche yana ọ nwere ike bụrụ ihe ngwọta maka ndị mmadụ na -enwe nsogbu akpụkpọ ahụ dị ka ihe otutu.
Ahụ anyị na -ezobe mmanụ mmanu a na -akpọ sebum site na gland sebaceous n'okpuru akpụkpọ ahụ. Ebumnuche nke sebum bụ ka akpụkpọ ahụ mee mmanu ma gbochie ka ọ kpọnwụọ. Sebum a na -agagharị na ntutu ntutu wee pụọ na pores.
Mana yana sebum, ntutu ntutu na -awụpụkwa akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ n'ahụ. Mgbe enwere sebum na sel anụ ahụ, pores nwere ike mechie. Nke ahụ na -ewulite nje karịrị akarị, nke na -ebute ntụpọ ọnya anyị maara dị ka ihe otutu.
N'ime ihe na -akpata nke a ime, anyị nwere ike ịhụ:
Mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ mechiri. Ọtụtụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ nke ewepụtara n'otu oge nwere ike ibute mwepụta nke sel na sebum na-ejikọ ọnụ wee mechie oghere ahụ.
Sebum gabigara ókè: Nnukwu sebum nwere ike igbochi pores, mee ka isi ahụ nwee isi, ma mepụta mmanụ gabigara ókè na akpụkpọ ahụ, nke ga -eduga zits na ntụpọ.
Oke nje bacteria: Mgbe mkpọchi akpụkpọ ahụ mere, nje bacteria dị na akpụkpọ ahụ ga -etoju, na -ejikọ ya na sebum wee bute mbufụt.
Oke homonụ: Testosterone na -abawanye n'oge ọ na -eto, na -eme ka gland sebaceous gbasaa ma mepụta sebum.
Ihu CBD & nchacha ihe otutu
Enwere ọtụtụ ụzọ iji tinye mmanụ CBD n'ime ahụ gị wee mee ka ọ rụọ ọrụ. ka ọ nwee ike ịrụ ọrụ. Ụzọ niile ga -eme ka ogige a na ndị na -anabata ahụ gị na -emekọrịta ihe ka ọ rụpụta nsonaazụ, mana n'ihe gbasara otutu, isiokwu bụ nhọrọ kacha mma.
Enwere ude dị iche iche, ude mmiri, serum na balms nwere ike dị iche iche nke cannabidiol. Mmanụ CBD bụ ihe a na -ahụ anya nke ukwuu ma nwee ike banye akpụkpọ ahụ ngwa ngwa na gland sebaceous. Isiokwu CBD, ọkachasị sitere na hemp bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ihi na mkpụrụ osisi hemp nwekwara amino acid dị mkpa.
Capsules bụ ụzọ dị mfe ma dị irè iji were mmanụ CBD. Ha na -abịa n'ike dị iche iche na mmetụta ha na -adịru ruo awa 8.
Ifuru ma ọ bụ e-liquid na-enye nsonaazụ ngwa ngwa n'ihi na uzuoku na-aga kpọmkwem na ngụgụ wee si ebe ahụ banye n'ọbara site na ịmịkọrọ ume. Ndị na -ahụ maka uzu ọkụ na -eme ka ngwaahịa dị ọkụ karịa ire ya ọkụ, yabụ na ọ nweghị ihe na -egbu egbu ga -abanye n'ahụ gị.
Tin CBures nke CBD
A na -ewere ọdịda na -abata. A na-enweta ha n'ike dị iche iche, hemp-naanị nke terpene etinyere na ha na-abịa n'ụdị dị iche iche.
Maka ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị amasị/anabata uto nke tincture mmanụ CBD, a na -enweta CBD n'ụdị nri, ihe ọ ,ụ ,ụ na nri. Nri CBD na -enye gị ọgwụ ga -ewe awa 8. Ọbụna ị nwere ike iji tinctures mee nri ụlọ.
Omume CBD na ECS nke akpụkpọ ahụ dị ịtụnanya dịka ahịhịa sitere na ya. N'ime "omume mgbochi ihe otutu" nke CBD, anyị nwere ike ikwu maka:
Ekwuru na CBD na -egbochi ọrụ lipogenic nke endocannabinoids anandamide na 2AG, nke a na -emepụta na gland sebaceous ma na -eme ndị na -anabata CB2, na -ahụ maka mmepụta sebum gabigara ókè. CBD na -ahazi mmepụta sebum.
Mmanụ CBD nwere mmetụta na -egbu egbu nke ukwuu, ọ nwere ike wepu nje ndị gbara ya gburugburu.
Mmetụta mgbochi mkpali nke mmanụ CBD na-egbochi ndị ọrụ "pro-acne" ịbawanye ọkwa cytokine pro-inflammatory.
CBD ọ na -enyere aka na ọnya ọnya?
Topical CBD mmanụ etinyere na hemp mmanụ nwere ihe na -agwọ ọrịa nke na -eme ka ọdịdị na ọnọdụ akpụkpọ ahụ ka mma ma ọ bụrụ na ejiri ya ugboro abụọ n'ụbọchị ma ọ dịkarịa ala ọnwa atọ.
CBD ọ na -arụ ọrụ n'ahụ anụ ahụ?
A na -ekwukwa na mmanụ CBD na -arụkwa ọrụ n'ahụ ahụ. Mwepu nwere ike ime n'olu, ubu, azụ, na obi n'ihi na mpaghara ndị a nwere ọtụtụ gland sebaceous karịa ahụ niile.
CBD nwere ike belata excretion sebum nke na -emepụta clog nke na -ebute zits. Ọ na -ewedatakwa ọnụ ọgụgụ nje bacteria na -agbakọta na saịtị ọrịa ma belata mbufụt na -eso ya.
CBD nwere ike inye aka na nsogbu akpụkpọ anụ ndị ọzọ?
Akpụkpọ anụ, nke bụ akụkụ kachasị na ahụ, nwere sistemụ akara ECS dị n'ime ya. CBD gosipụtara na ya na ya na -emekọ ihe. Ihe mgbochi nje, antioxidant, mgbochi microbial na mgbochi mkpali nke CBD na-enyere aka idozi ahụike ma nwee ike nyere aka belata/belata ọnọdụ akpụkpọ anụ ndị ọzọ dị ka psoriasis, dermatitis, na akpịrị kpọrọ nkụ na akpụkpọ ahụ.
Ọ bụ ezie na nyocha ka na -aga n'ihu, egosiri na CBD nwere nnukwu ike ịgwọ ọtụtụ ọnọdụ akpụkpọ ahụ, gụnyere ihe otutu, site na mbenata mmepụta sebum na mbufụt, na iwepụ nje bacteria.
Ọ dịghị onye ọzọ na-ahụ maka ihe otutu na-ahụta CBD n'ihe banyere ịdị irè. Ọbụghị naanị nke a mana cannabinoid egosila nnukwu nnabata na mmadụ ma ọ naghị akpasu akpụkpọ ahụ iwe.
Ihe otutu na ọnọdụ akpụkpọ anụ ndị ọzọ ekwesịghị imetụta ndụ anyị n'ụzọ na -adịghị mma, mana mgbe ha malitere imetụta ahụike uche anyị, ọ bụ oge ịchọ ihe okike eke dị ka CBD.
PreviousPrevious post:CBD, CORONA VIRUS NA EMUMUNITYOsoteNext post:6 Ga-enwerịrị ngwaahịa nlekọta anụ ahụ CBD ma ọ bụrụ na ibi na New York